Ministry of hanging lights with reflectors reflective PMMA, PC 16 inch reflector type, without the power
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ နေအိမ်၊ အဆောက်အဦး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အစိုးရပရောဂျက်များ၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကောင်းဆုံး / ယုံကြည်စိတ်အချရဆုံး အသုံးပြုနိုင်သော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံထုတ်၊ LiOA (လီဝါး) အမှတ်တံဆိပ် Cables &amp; Wires များကို မြန်မာပြည်တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပစ္စည်းမှန်၊ ဈေးနှုန်းမှန်၊ အမျိုးအစားစုံလင်စွာဖြင့် In Stock ထားရှိကာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ဖြူးရောင်း ချပေးလျှက်ရှိပါသည်။</span></p><p style="margin-bottom: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(37, 35, 122);">Ministry of hanging lights with reflectors reflective PMMA, PC 16 inch reflector type, without the power</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-bottom: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">- Applications lighting for shops, supermarkets, restaurants, factories, warehouses, stalls and interior decoration<br>- Type of ball used directly, Compact ball, or used with external power - power 250W MAX</p>
Ministry of hanging lights with reflectors reflective PMMA, PC 12 inch reflector type, not the phone together
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ နေအိမ်၊ အဆောက်အဦး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အစိုးရပရောဂျက်များ၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကောင်းဆုံး / ယုံကြည်စိတ်အချရဆုံး အသုံးပြုနိုင်သော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံထုတ်၊ LiOA (လီဝါး) အမှတ်တံဆိပ် Cables &amp; Wires များကို မြန်မာပြည်တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပစ္စည်းမှန်၊ ဈေးနှုန်းမှန်၊ အမျိုးအစားစုံလင်စွာဖြင့် In Stock ထားရှိကာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ဖြူးရောင်း ချပေးလျှက်ရှိပါသည်။</span></p><p style="margin-bottom: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(37, 35, 122);">Ministry of hanging lights with reflectors reflective PMMA, PC 12 inch reflector type, not the phone together</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-bottom: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">- Applications lighting for shops, supermarkets, restaurants, factories, warehouses, stalls and interior decoration<br>- Type of ball used directly, Compact ball, or used with external power - power 150W MAX</p>
Ministry of hanging lights with reflectors reflective PMMA, PC 12 inch reflector type, the phone comes
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ နေအိမ်၊ အဆောက်အဦး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အစိုးရပရောဂျက်များ၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကောင်းဆုံး / ယုံကြည်စိတ်အချရဆုံး အသုံးပြုနိုင်သော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံထုတ်၊ LiOA (လီဝါး) အမှတ်တံဆိပ် Cables &amp; Wires များကို မြန်မာပြည်တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပစ္စည်းမှန်၊ ဈေးနှုန်းမှန်၊ အမျိုးအစားစုံလင်စွာဖြင့် In Stock ထားရှိကာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ဖြူးရောင်း ချပေးလျှက်ရှိပါသည်။</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span><span style="color: rgb(37, 35, 122); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Ministry of hanging lights with reflectors reflective PMMA, PC 12 inch reflector type, the phone comes with</span></p><p style="margin-bottom: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">- Applications lighting for shops, supermarkets, restaurants, factories, warehouses, stalls and interior decoration.<br>- Type of ball used directly, Compact ball, or used with external power - power 250W MAX</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
New Arrival Crystal Lighting မီးဆိုင်းကြီးများ
လှပဆန်းသစ်မှု ကတော့ ပုံတွင် မြင်တွေ့ရသလိုပါပဲ။ ပုံမှာတော့ မီးထွန်းထားတဲ့ အခါမြင်တွေ့ရတဲ့ အရောင်လေးပါ။ အိမ်တစ်အိပ်၏ လှပဆန်းသစ်မှုကို ဒီ Crystal Lighting မှ အထောက်အကူပေးနိုင်မှာ အသေချာပင်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်မှု အပြင် အရည်အသွေးကို အဓိကထားပြီး ဖန်တီးထားသောကြောင့် ၁၀၀% ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ မီးထွန်းထားမှ အရောင်ထွက်ပြီး လှတာလား? မဟုတ်ပါဘူး။ မီးမထွန်းလည်း အပြင်မှ အလင်းကို တွန်းကန်ပေးနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် Crystal လေးများကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် မီးပိတ်ထားသည့်တိုင် အပြင်မှ အလင်းများကို ဖြာထွက်လင်းလက် တောက်ပစေသည်။ မြင်သူတိုင်း ငေးမောကြည့်ရလောက်အောင် လှပပြီး ကြည်နှုးစရာကောင်းအောင် တောက်ပသစ်လွင်သော မီးဆိုင်းကို မနောတွေ့လို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရင် ကျွန်တော်တို့ Shworoom သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Crystal Chandeliers K9
လင်းလက်ပြီး လှပတဲ့ မီးဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ဧည့်ခန်း၊ ရုံးခန်း၊ Hotel နဲ့ ကွန်ဒို အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ခန့်ငြားစွား အလှဆင်ဖို့အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး သေသပ်လှပသောဒီဇိုင်းများဖြင့် ဖန်တီးထားသော အနုစိတ်အလှများဖြင့် သင့်အိမ်ကို အလှဆင်ခြင်းဖြင့် စိတ်ချမ်းသာမှုကို အရယူလိုက်ပါ။ ။ခေတ်မှီသော အဆောက်အအုံများ၊ရှော့ပင်းစင်တာများ နှင့် ဟိုတယ်များတွင် ခန့်ညားထည်ဝါစွာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။အလှဆင် မီးဆိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူနေမှုအဆင့်တန်း မြင့်မားကာ လှပတည်ဝါမှုကြောင့် စိတ်ချမ်းသာမှု အပြည့်အဝ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ညဘက် အိပ်စက်အနားယူချိန်တွင်လည်း အနှောက်ယှက်ကင်းသော အလင်းရောင်ဖြင့် စိတ်ကျေနပ်မှုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ မီးတစ်လုံးချင်းစီ၏ Lighting အားကိုလည်း ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ အလင်းပြန်နိုင်ဖို့ ဝါယာကြိုး တစ်လိုင်းစီ အသုံးပြုပေးထားသည်။ လှပသေသပ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားသော Lighting မီးဆိုင်းကြီးများကို ဒီဇိုင်းစုံ ရွေးချယ်ဝယ်ယူ နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ရေကူးကန်သုံး LED Underwater Light နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရည်အသွေးကောင်းသော ရေကူးကန်သုံး LED Light ကိုStainless Steel နှင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သံချေးတက်ခြင်း နှင့် မိုးဒဏ် ရေဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရုံသာမက ပါဝင်သော LED မီးလုံးများသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြောင့် တပ်ဆင်ပြီး အသုံးပြုသည့်အချိန်မှ ရေရှည်အသုံးခံသော ပစ္စည်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပစ္စည်းကတော့ အဆင်မြင့်ရေကူးကန်များ နှင့် ဟိုတယ်ကြီးများ ကွန်ဒိုများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Candle chandelier ( K9 crystal )
အလွန် ကြည်လင်တဲ့ မီးအလင်းရောင်ကို အထူးပြု၍ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် မီးဆိုင်းများကို လှပတင့်တယ်စွာ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ မီးဆိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ မီးလုံး တစ်လုံးချင်းစိအတွက် ဝါယာကြိုးတစ်လိုင်းချင်းစီ အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ ဟိုတယ်၊ ရုံးခန်း၊ ကွန်ဒို အစ်စရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ မီးဆိုင်းအလှများ တပ်ဆင်လိုပါက Email (or) Chat Box ကနေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ မီးထွန်းထားမှ လှတာမျိူးမဟုတ်ပဲ မီးပိတ်ထားရင်တောင် အပြင်မှ အလင်းများကို အလင်ပြန်ပြီး တောက်ပလင်းလကမှု အစွမ်းသတ္တိပေးနိုင်သော အဆင့်မြင့် Crystal များဖြင့် ဖန်တီးထားသော မီးဆိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရေကူးကန်သုံးLED နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရည်အသွေးကောင်းသော ရေကူးကန်သုံး LED Light ကိုStainless Steel နှင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သံချေးတက်ခြင်း နှင့် မိုးဒဏ် ရေဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရုံသာမက ပါဝင်သော LED မီးလုံးများသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြောင့် တပ်ဆင်ပြီးအသုံးပြုသည့်အချိန်မှ ရေရှည်အသုံးခံသော ပစ္စည်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပစ္စည်းကတော့ အဆင်မြင့်ရေကူးကန်များ နှင့် ဟိုတယ်ကြီးများ ကွန်ဒိုများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Professional Lights Factory Liner Pool Lights
LED Downlight ( 4W - Square )
Energy-Saving နှင့် Power-Source တို့ကို ပူးတွဲထည့်သွင်း ဖန်တီးထားသော မီးအိမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့် အလူမီနီယံ ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် High-purity Lamp အဆင့်ရှိ Epistar LED chip တစ်ခုဖြစ်သည်။ Prosuct ရဲ့ Detail အပြည့်အစုံကို ကျွမ်းကျင်သော မီးအိမ်တပ်ဆင်သူများက အနေအထားနှင့် အကျယ်အဝန်းပေါ်မူတည်ပြီး အခမဲ့ဆွေးနွေးတပ်ဆင်ပေးပါသည်။ အဆိုပါ မီးအိမ်ကို ရှော့ပင်းစင်တာများ၊ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများ နှင့် ဟိုတယ်များတွင် အသုံးများသော မီးအိမ်အမျိူးအစားဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့် (Lamp) လမ်းမီးအမျိုးမျိုး
အဆိုပါ Quicksilver Lantern ကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ဒီဇိုင်းပုံစံ နှင့် အပူဒဏ်ကို ကောင်းမွန်စွာ တုံပြန်နိုင်အောင် အထူးဖန်တီး ထုတ်လုပ်ထားသည်။သိပ်သည်းဆများပြီး 4mm အထူရှိသည်။ဖန်ကို အကွေးပုံစံဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည့်အပြင် Polycarbonate Silver Reflector ကို မီးအိမ်အတွက် တည့်သွင်းထားပါသည်။integral ၏ power unit ကို မီးအိမ်ပေါ်အခြေခံပြီး entire အပေါ်ဆုံးတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရ လွယ်ကူစေရန် hingable ကို တည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ Sodium , Metal Highlight Watt အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဈေးနှုန်းကလည်း အစားစားရှိပါတယ်။
ပုံမှန် ရေပန်းတွင် ကာလာစုံနဲ. လှပစေမယ့် ကာလာစုံ ရေပန်းလေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရနေပါပြီ။ ရေမချိုးချင်တဲ ကလေးတွေကို ရေချိုးဖို. တိုက်တွန်းစရာ မလိုတော့ပါ။ Battery မလို ရေပန်းအရှိန်နဲ. အလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်ရတာလည်း ပုံမှန် ရေပန်းလိုပါဘဲ ရေပန်းဖွင့်မှသာ ကာလာစုံနဲ. ရေချိုးခန်းတစ်ခုလုံး ကချင်စရာ လင်းထိန်နေမှာ ဖြစ်တဲအတွက် အခုပင် မှာ ယူလိုက်ပါ။ https://www.facebook.com/RocketOnlineShopping/videos/878466788958307/ ဈေးနှုန်း - 17000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် လှပဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့် တင့်တယ်ထည်ဝါသော မီးဆိုင်းကြီးအား သင့်ဆီကို အရောက်ပို့ပေးနေပါပြီ။ အရောင်ကတော့ ကျက်သရေနှင့်ပြည့်စုံသော ရွှေဝါရောင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဖယောင်းတိုင်မီးတိုင် ၆ တိုင်မှ ၁၂ တိုင်ပါဝင်အသုံးပြုထားသည်။ ယခုပြသထားသော ဒီဇိုင်းပုံစံအပြင်ကို အမျိူးမျိူးသော ပုံစံကွဲ မီးဆိုင်းကြီးများကို တစ်နေရာတည်း စိတ်တိုင်းကျရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဈေးနှုန်းလည်း အတင့်သင့်မို့ အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေမှာ အသေချာပင်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကိုတော့ အပြည့်အဝစိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပြီး ဝယ်ယူအားပေးသော Customer များ စိတ်တိုင်းကျ အကြိုက်တွေ့စေခဲ့တဲ့ FeedBack ကောင်းများ ပြန်လည်ရရှိနေသော Brand တစ်ခုဖြစ်သည်။
Lighting Arrester ( LA )
Reliability and excellent protection based on years of experience and expertise in surge protection. Good anti-moisture capability, resistant to pollution. GIS metal oxide surge arrester, composite metal oxide lightning arresters and porcelain metal oxide lightning arresters are available. Long life and lightweight. Easy installation and maintenance. Good sealing capability to ensure reliable operation. High energy absorption ability.
LED Wall Lamp(Single/Twin)
ကျွန်တော်တို့ Company မှ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော Lighting ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ဒီဇိုင်းဆန်းပြီး လှပသေသပ်မှုဖြင့် ပစ္စည်းစုံ ဒီဇိုင်းစုံကို Customer များစိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ရန် ပစ္စည်းတစ်ချိူ့ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ယခုပြသထားသော ချစ်စရာကောင်းပြီး လှပသေသပ်သော နံရံကပ် wall lamp ကို Customer များ လိုချင်သည့် Color, Size နှင့် structure များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ထုတ်လုပ်ဖန်တီးထားသည်။ ယခုပြသထားတာကတော့ မီးထွန်းထားရင် မြင်တွေ့ရမယ့် မြင်ကွင်းပါ။ လိုချင်တဲ့ မီးအရောင်ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နံရံကပ်အသုံးပြုရတဲ့ Wall Lampလေး ဖြစ်တဲ့အတွက် မီးမထွန်းထားရင်တောင် အပြင်ကပုံဖော်ထားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ဖန်သားပြင် အပေါ် အလှဆင်ပုံဖော်ထားသောကြောင့် သဘာဝအတိုင်း လှပဆန်းသစ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းပုံစံအမျိူးမျိူးနှင့် မီးအရောင်အမျိူးမျိူးကို နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများဖြင့် ခေတ်မှီစွာ ထုတ်လုပ်ထားသော Wall Lamp တစ်ခုဖြစ်သည်။ အားပေးသော မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ်များအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
LED Circles 9W, 12W, 15W
ယခုပြထားတဲ့ LED ဖန်မီးလေးကတော့ အိမ်တွေလည်း အသုံးပြုကြသလို ရှော့ပင်းမော်များ နှင့် Commerial Building များ နှင့် အဆောက်အအုံကြီးများတွင် အသုံးများသော ဖန်မီးအိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ မီးလွှတ်အားကောင်းပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသော အလင်းရောင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အထဲမှ LED မီးလုံး ကျွမ်းသွားရင်လည်း အလွယ်တကူ ဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရောင်လေးပါ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ Enenry Source ဖြစ်တဲ့အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လည်း ကိုက်ညီမှု ရှိပြီး အသုံးပြုရ အဆင်ပြေစေသည်။ နေရာမရွေး ဒေသမရွေး အသုံးပြုနိုင်သော LED ဖန်မီးလေးကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဆက်သွင်မေးမြန်းချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Full Power Company နှင့် အခုပဲ ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်။